Detox: Ny angano sy ny zava-misy - Fialam-boly
Home » Blog » Detox: Ny angano sy ny zava-misy
Detox: Ny angano sy ny zava-misy
Ny fampiasana toeram-pivarotana, na sauna, mba hampiroboroboana ny sweating dia manampy amin'ny fanesorana ny fisian'ny poizina ao amin'ny vatanao. Ny iray amin'ireo fomba voajanaharinao amin'ny fomba enti-manimba ny tenany, dia amin'ny alalan'ny fahatsapana (sweaty). Na izany aza, ny sanda tranga (1% na latsaka) amin'ny toaka ao amin'ny vatanao dia voaroaka toy izao. Saunas sy ny trano fisotroan-toaka lehibe dia manampy amin'ny fombam-pahaizana momba ny metabolismo, satria ny fanitsakitsahana dia fitantanana metabolika manan-danja.
Ampiasaina ny paozin'ny hoditrao amin'ny alàlan'ny trano fisotroana, na sauna, izay ahafahana manala fanasitranana bebe kokoa amin'ny alalan'ny hatsembohanao. Tsy azo esorina amin'ny fomba toy izany daholo ny poizina rehetra, ary rehefa lasa izy ireo dia misy fihetsika hita maso eo amin'ny hoditrao; fanasitranana, akne, na maingoka ohatra. Ny haavon-tsetroka faratampony ao anaty efitrano fandroana dia manakana ny fahatsapana ny fahatsapana ny fahatsapanao ny hatsembohana, manampy amin'ny fihenan'ny famokarana solika amin'ny hoditra, izay midika hoe fihenan'ny aknao na hoditra. Rehefa vita, indrindra fa ny fampiasana sona, na efitra fisakafoanana, dia tena manampy tokoa ny manadio sy manala ny vatana.
Ny famonoan-tsakafo Detox dia mampiditra vola be amin'ny vola miditra, ary koa voafetra be loatra. Ny sakafo fihinam-bidy natao hanampiana ny fanindronana ny vatanao dia mety ho mendri-ponenana araka izay ilainao azy. Tsara homarihina anefa fa ny fihenan'ny famerana indray dia mety ho sarotra kokoa aminao ny hifikitra amin'izany.
Ny sakafo Dioksidia dia afaka mampiditra mora ny sakafo mahasalama raha toa ka ahitana ny zavatra tena ilaina, toy ny amin'ny karazana sakafo hafa mahomby. Ny legioma marevaka, voankazo voajanahary, ary voa dia ohatra amin'ny sakafo izay mora vidy sy mahomby amin'ny fikarakarana fanosehana. Ny fanampiana ny dite maitso ho an'ny sakafonao dia mety koa amin'ny fanamafisana ny fanalana ny vatana.
Ny fitsaboana detox amin'ny tenany manokana dia fomba haingana sy mahomby afaka ampiasanao mba handoavana lanja. Ankehitriny dia marina fa rehefa manomboka ny fitsaboana detox dia mety ho tratry ny fahaverezan'ny vatanao ianao. Na izany aza, rehefa tapitra io karazana sakafo io, dia misy lanjany ara-dalàna. Izany dia satria lanjany ny lanjany indrindra. Ny dioxide dioxide dia tsy misy fanatanjahan-tena koa dia miteraka lanjan'ny lanjany, ny fahaverezan'ny vozona koa.
Ny fihinanana izay ahitana singa entina mampidi-doza manatsara ny sakafo miaraka amin'ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia ny fomba mahomby indrindra amin'ny fahaverezan'ny fahavoazana. Mampiasa ny mpanampy metabolika toy ny foods detox and zava-pisotro (toy ny dite maitso) dia mampitombo ny fahaizan'ny metabolika ho an'ny vatanao. Ny lanjany dia very vitsy noho ny mahazatra; Ny fiantohana ny lanjany dia mety hijanona ela kokoa, ary tsy ho very ny masirin'aretina.
Hahatsiaro tsinontsinona ianao, ho tezitra na hikorontana ianao amin'ny alàlan'ny fanesorana anao. Tsy dia mahazatra loatra ny mahatsapa ho mafimafy ny andro voalohany aorian'ny fanombohan'ny fanapotehana. Satria io no vanim-potoana izay hanitsiana ny vatanao amin'ny loharanon-kery vaovao, nefa manandrana manaparitaka poizina. Raha mbola mitohy izany fahatsapana izany dia zava-dehibe ny manakana anao sy manonona ny zavatra tafiditra ao amin'ny fanesorana anao.
Aorian'ny fizotran'ny fanariam-panajàna anao izay mahatsiaro ho reraka, ary angamba marary, dia tokony hahita fahatsapanao tsara kokoa ianao alohan'ny hanombohanao. Ny olona dia mahatsiaro ho toy ny hoe manana hery bebe kokoa izy ireo, ary tsy dia maharary loatra. Tsy mahazatra koa ny mahazo tory tsara kokoa vokatr'izany.
Ny fanadiovana sokatra dia mahomby amin'ny fomba manala ny vatana. Amin'ny fandaniana sakafo tsy misy afa-tsy sira (fivarotana nividianana na homemade), ianao dia mandoro amin'ny toeram-pivarotan-tsakafon'ny vatanao raha tsy mameno azy ireo. Ny tsy fahampian'ny fibera amin'io karazana sakafo io dia mety miteraka fikorontanana.
Tokony hampiasaina ny siramamy miaraka amin'ny sakafo matsiro bebe kokoa; mba hisorohana ny fandoroana sy ny fikorontanana, ary hampitombo ny tombontsoa mety. Manolotra ny sira ho ampiasaina ho toy ny fanoloana hanina, na sakafo iray, fa tsy hanokana ny sakafo manontolo. Satria ambany kalorie izy ireo, safidy tsara izay be dia be amin'ny sakafo mahavelona.
Ny fitomboan'ny fitomboan'ny rano no manampy amin'ny famoahana poizina avy amin'ny vatana. Na dia tena zava-dehibe tokoa aza ny fisotroana rano sy ny fialana sasatra, na rehefa tsy misy ny fanesorana dia toy ny zava-drehetra dia mety ho ratsy be. Ny fihenan'ny rano loatra dia mety hahatonga fahatsapana aretina, disorientation ary aretina matetika.
Ny rano dia manampy amin'ny famongorana sy ny fanesorana ny vokatry ny fako amin'ny rafi-pandaminana. Izany dia afaka manampy amin'ny fanesorana ny poizina misy poizina sy ny vokatra azo avy amin'ny alikaola. Ny tombontsoa lehibe indrindra anefa dia ny fampitomboana ny fitomboan'ny fitomboan'ny rano dia manatsara ny fatran'ny metabolismao, mampiroborobo ny andraikitra ara-batana kokoa (anisan'izany ny fanesorana voajanahary).
Ity lahatsoratra ity dia natolotr'i Sam Socorro avy amin'ny Fitahirizam-bokatra, Sam dia manam-pahaizana momba ny fahasalamana sy ara-pahasalamana ary nanoratra sy nianatra lohahevitra toy ity ity nandritra ny taona 10.
Janoary 29, 2017 Sam Socorro Blog Tsy asian-teny
Fanontana voafetra Reebok CrossFit Nano 5.0 Giveaway